ဒီတော့ LONG, နှုတ်ဆက်, (ဂျာမန်နှုတ်ဆက်), နှုတ်ဆက်! - ကိန်းဘရစ်တက္ကသိုလ် - သတင်း
ဒီတော့ Long, နှုတ်ဆက်, (ဂျာမန်နှုတ်ဆက်), နှုတ်ဆက်!
ကျွန်ုပ်တို့ Kaleidoscope သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည့်ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါ။ Jossie အီဗန် Revs မှာတနင်္လာနေ့ညဥ့် '' Fusion '' ဖို့ကျေးဇူးတင်နှုတ်ဆက်လှိုင်းတံပိုး။
နောက်ဆုံးအသုံးအနှုန်းအမှတ်အသား 'Fusion ကို' ညက ကင်းဘရစ်ရဲ့ LGBT + ပါတီ goers များအတွက်အနည်းငယ်သာရွေးချယ်စရာတစ်ခု။ ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်ချစ်ဖွယ်ကောင်းသောနှုတ်ဆက်ခြင်းထက်လျော့နည်းကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရွေ့လျားခြင်းနှင့် '' Kaleidoscope '' ကိုလက်ခံရန်ဤနေရာတွင်ရှိသည်။ ။ ငါ '' Fusion '' ကိုင်ထား နီးပါး အလွန်နီးကပ်လာကြေကွဲဖွယ်အဘို့အကိုယ်ကိုယ်တိုင်တာဝန်ရှိသည်။
ငါမကြာသေးမီကအမှတ်တံဆိပ်အသစ်ဖြင့်မှုတ်သွင်းခံခဲ့ရသည်ဟုသာယူဆပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားမဟုတ်သောအခြားသူနှင့်နှုတ်ခမ်းကိုပေါင်းစပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ အရက်၏တာဝန်မဲ့သောလမ်းညွှန်မှုအောက်တွင်ကျဉ်းကျဉ်းသောအိမ်သာအဖုံးတစ်ခု၏အတွင်းပိုင်းတံခါးသည်သူမအမည်မဖော်ပြရမည့်သူနှင့်စကားပြောနေခြင်းအတွက်အသင့်တော်ဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အားလုံး၏မကောင်းသောအရာသည်တံခါး၏နောက်ကျောတွင်ဝဲနေသောအစွန်းအထင်းများကဲ့သို့ရှင်းလင်းနေခဲ့သည်။ ငါအချိန်ကဒီအခိုက်အတန့်၌ကိန်းဘရစ်၌အကြီးမားဆုံးအစွန်းအထင်းများနှင့်လုံး ၀ ရှက်ရွံ့ခဲ့သည်။
ပိုဆိုးတာကဆိုးတာကအိမ်သာထဲကနေအမြန်ထွက်ထွက်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတာကတော့ကျွန်တော့်ရဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့အရာတိုင်းရည်းစားပါ။ နှလုံးကြေကွဲဖွယ်နီးကပ်စွာမိမိကိုယ်ကိုအနာတရဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်း၏အူလမ်းကြောင်းနာကျင်စေသောနာကျင်မှုသည်သင် The Tab ၏စာဖတ်သူများကိုဝေမျှရန်အလွန်ခက်ခဲလွန်းသည်။ ငါသေချာပေါက်သင်ထင်ယောင်ထင်မှားမသက်ဆိုင်သောနှင့်ဆက်စပ်သောအမုန်းတရားနှင့်အတူမှတ်ချက်ပေးရန်နှင့်ယိုယွင်းသောအစွန်းအထင်းသဘောထားတွေသံယောင်လိမ့်မည်သေချာသည်။
အဆိုပါအပြစ်တင်ငြင်းသည်ငါ၌တည်ရှိ၏ ... ပြီးတော့အမည်ရှိခံရမရသူကိုသူ, နှင့် 'Fusion' ။ ဤအဘယ်သူအားမျှဖြစ်ပျက်ခဲ့ကြလိမ့်မယ်အလင်းရောင်အားပေးအားမြှောက်မှေးမှိန်၏အဆုံးစွန်သောရဲ့စျေးပေါ lager, sultry မီးခိုးစက်များနှင့်မှိန်ဖောက်ပြန်ဘို့ဖြစ်ဘူးအကယ်စင်စစ်။ WANK Stain !! ဟုတ်တယ်၊ အများဆုံး ငါ့ကို၏နောက်နေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ငါဘယ်လိုသိလဲဆိုတာနည်းလမ်းတွေထဲမှာပါ ၀ င်ပတ်သက်သူအားလုံးကိုလူသိရှင်ကြားတောင်းပန်ပါတယ်။ မိမိကိုယ်ကိုသတိပြုပါ၊ အခြားသူများကိုမနမ်းမီပွင့်လင်းသောဆက်ဆံရေးကိုသဘောတူပါ။
သင်အကြိုက်ဆုံး uni meme ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာအားလုံး၏ကြီးကြပ်မှူးများအားပြောခဲ့သည်
Parklife 2017 အစီအစဉ်ကိုကြေငြာခဲ့သည်
'' အလျင်အမြန် Nashville ': Tennessee ပြည်နယ်အတွက် Tinder
အဆိုပါ noughties အတွက်အားလုံးမိန်းကလေးများမပါဘဲအသက်ရှင်နိုင်ဘူးဝမ်းနည်းဖွယ်အမှုအရာ
17 ငါတို့ရှိသမျှသည် Netflix အပေါ် Night Stalker အတူတူစောင့်ကြည့်နေသည်ဟုသက်သေပြကြောင်းတုံ့ပြန်မှု
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးတွင်အကျဆုံးအဆုံးဆုံးသော uni ခန်းမများအတွက်မဲပေးရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်
အားလုံး The Boys နီးပါးအခြားအဆုံးသတ်ခဲ့ငါကဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါဘူးတကယ်ဝမ်းနည်းမိပါတယ်
'' ထိုးစစ် '' စားဆင်ယင်ကုဒ်နှင့်အတူလူမျိုးရေးကို profil စွပ်စွဲအရှေ့လန်စင်းဘိုးလင်းလမ်းကြား
ထွက်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာ YouTubers ဟာကြေကွဲဖွယ်ရာကမကထပြုထားတဲ့ Instagram ရဲ့အဆိုးဝါးဆုံးပါ